HomeWararka MaantaDowlada Kenya oo Tilaabo ay Emaraadka uga aargoosanayso Qaaday
January 11, 2022 Wararka Maanta, Wararka Caalamka 0
Dowlada Kenya ayaa qaaday tallaabo u muuqata aargoosi ,kadib markii ay hakisay mudo isbuuc ah in dalkeeda kasoo degaan diyaaradaha rakaabka ee sida tooska ah uga imaanaya dalka Imaaraadka Carabta.
Hay’adda duulista hawada Kenya oo loo soo gaabiyo KCAA, ayaa sheegtay in tallaabadan ay jawaab u tahay xayiraad xaga safarka ah oo Imaaraadku ku soo rogay duulimaadyada rakaabka ee ka imaanayay Kenya.
Go’aankan dowladda Kenya kasoo baxay ayaa la sheegay in uusan saameyn ku yeelan doonin diyaaradaha xamuulka qaada ayna kaliya ka kooban yihiin diyaaradaha rakaabka qaada ee Imaaraadka ka imaan jiray.
Dowlada Imaaraadka Carabta ayaa horey u hakisay diyaaradaha rakaabka ee uga imaan jiray dalka Kenya, kadib markii Imaaraadka ka degeen rakaab watay shahaadada Covid-19 balse markii ay ka dageen Imaaraadka laga helay cudurkaasi.
Madaxweynaha Puntland Siciid Deni oo lakulmay Safiirka Soomaaliya Fadhiya Emaraadka Carabta